Bisoprolol - zviratidzo zvekushandiswa
Bisoprolol inoreva zvinodhaka zvinodzora mwoyo rhythm uye izvi hazvirevi kumabasa ayo. Zviratidzo zveBaoprolol zvakakura kwazvo, asi mushonga unofanirwa kushandiswa zvakajeka maererano nechirongwa.
Zviratidzo zvikuru zvekushandisa kwechirwere Bisoprolol
Kushandiswa kwebasa re bisoprolol kunokonzerwa nekuti iyi ndeyekuita kwenguva refu, iyo isingagoni kuvhara pakarepo. Iyi adrenoblocker inosarudza kuita, kupinda mumuviri, iyo inosarudzira inokanganisa mabheta emitambo. Somugumisiro, tinogona kusiyanisa mabasa akadaro emishonga:
hypotensive, kureva kuti, kuderedza ropa;
kuderera kwekutengesa kwemashoko emagetsi mumoyo.
Mumatambudziko, kushandiswa kwenguva refu kwemapiritsi e-bisoprolol kunobvumira kuchengetedza mwoyo rhythm, kuwedzera diastole uye kuderedza mukana wekurwadziwa kwemoyo.
Pane zviratidzo zvakadai zvekushandiswa kwe bisoprolol:
hypertension of the arterial type;
moyo rhythm kuvhiringidzika;
Nhamba uye kutungamirirwa kweBasoprolol
Sezvo utachiona neBasoprolol inofanira kuva yakagara kwenguva refu, usati watanga kushandisa mushonga, unofanira kufunga kuti haugone kumira pakarepo izvi. Mukuwedzera, mumavhiki ekutanga mushure mekutanga kurapwa, mazano ekurapa nguva dzose anodiwa. Munguva yekurapa murwere anofanira kuongorora nhamba yekubata mwoyo (pulse) uye kuwedzerwa kweropa pane dzimwe nguva pazuva, sezvo kune ngozi yekusimba kwakasimba mune izvozvi zviratidzo. Vanachiremba vanorumbidza zvikuru kamwe kamwe pavhiki kuti vaite chirwere chemuviri.
Nzira yekushandisa bisoprolrolol haina kukonzera chero matambudziko akakura kuvarwere. Ikopa rinokurudzirwa kuti riitwe mangwanani mangwanani musina chinhu chisina chinhu, yakashambidzwa nechinguva chemvura yakachena. Kubatana kwechirwere ichi nechikafu hakuna kuongororwa zvakaringana, asi mhinduro yepakutanga haina kuratidza kusavhiringidzwa kwechiito chepiritsi kana zvakatorwa nechingwa.
Zvose zvinogamuchirwa zuva rega reBisoprolol zvinokwana 20 mg, asi kazhinji kacho mushonga unorayirwa muhuwandu hwe 10 mg muzana rimwe chete. Nzira yekurapa inogona kupera kwemakore, inogona kukanganiswa, zvishoma nezvishoma kuderedza chiremba kwemavhiki mashoma.
Kana pane zvimwe zvinopesana, kana zvimwe zvirwere zvinoshandisa kushandiswa kweBasoprolol, imwe nzira yekurapa inogona kurongerwa. Muvhiki yekutanga murwere anotora 1.5 mg yemishonga. Muchipiri uye chechitatu vhiki - 3.5 mg ye bisoprolol. Kupfuurira kuwedzerwa kuwedzerwa kwacho kuwedzera: 5 mg, 7.5 mg, 10 mg. Mushure mokunge chirwere chemazuva ose chinosvika 10 mg, kurapwa kunogona kupedza vhiki dzinoverengeka uye kunyange mwedzi, kusvikira inogona kuregesa mishonga. Muchiitiko ichi, kuderedzwa kwechirwere kunoitwa nechechirairo, svondo rimwe nerimwe zvishoma nezvishoma kuderedza chiyero che bisoprolol.
Kupindirana kwekushandiswa kweBisoprolol
Iyi mishonga ine zvakawanda zvinopesana. Chokutanga pane zvose, hachigoni kushandiswa panguva yekurwisa angina uye dzimwe kukanganisa kwemoyo. Kutanga kurapa kunogona kuva mushure memavhiki mashomanana mushure mekugadzikana kwemurwere. Zvinyorwa zvisinganzwisisiki ndezvizvi:
weak sinus node;
propensity to bronchospasm (asthma, emphysema, nezvimwe);
Mushonga unoshandiswa nekuchenjerera mukati mezvirwere zveputsvo uye chirwere cheshuga, chirwere cheshuga, panguva yekuzvitakura uye lactation. Mune zvimwe zviitiko (zvikurukuru pakutanga kwechirapa), mushonga wacho unogona kuchinja kukwanisa kutyaira uye kuita zviito zvinoda kukwirira kwakakwana.
Scabies - incubation period
Zvirwere zvepleen - zviratidzo uye kurapa
Kurapa kwe gout nekuwedzerwa
Zvinokonzera zvipembenene kusvika ragweed - zviratidzo
Iodinol - yakagadzirwa
Mapiritsi kubva kunotonhora
Pane kuderedza kutonhora kwe 39 mune munhu mukuru?
Nhamo iri kuruboshwe rwomukoma
Zvikwama zvevakadzi zvepamusoro pefudzi
Ndezvipi zvehombodo dzinopfeka nepaki munguva yechando?
Mwari weEgipita weMakomo
Inokurumidza sei kuchenesa imba?
Mapuranga-mapuranga ematanda emasvingo
Alissum - kukura kubva kumbeu
Nicky Minaj muhuduku
Ndeupi musiyano pakati pe smartphone uye foni?
Bracelets ane mazita
Bhari phariji pamvura
Proginova ne IVF
Nzira yekupfeka shawl nenguvo yehutu?
Mapapiro ekupfekedza kwekunaka kwemukati
Oval maumbirwo emisipi
Kukundikana kwemoyo muchechecheche
Fin fungus - kurapwa mune rimwechete aquarium
Chiratidzo - shiri yacho yakabhururuka nepawindo
Moonshine pa pine nuts - kamukira